Mod Cyborg Naga Mid Ah | Isku day qaabkan xiisaha leh
Inicio/ciyaaraha/Dhexdeena/Cyborg Mod oo ah Dhexdeenna
0 1.211 2 daqiiqo akhri
Waxaan ku sii wadaynaa qaababka superhero iyo markan waxaan heysanaa mid ka mid ah kuwa ugu cadcad dad badan, waa qaabka 'Cyborg mod for Us Us'. Qaabkan waxaan hubnaa inaad heli doontid waqti aad u wanaagsan, in kasta oo aad tahay wax fudud oo aan ku arki doonno oo keliya isbeddellada heerka muuqaalka ah, weli waa mid aad u soo jiidasho leh sida dhammaan noocyada superhero ee Dhexdeenna ah.
Qaabkani waa mid fudud, laakiin wuxuu leeyahay dhammaan nuxurka aan ka jecelahay adduunka geesiyaal aan la soo wada kornay ilaa yaraanteenii. Shaki la'aan mid ka mid ah waa Cyborg, tan iyo sannadihii uu ku guuleystay jacaylka dhammaanteen. Taasna waxaan ku arki karnaa baahida weyn ee loo qabo qaababka superhero ee naga mid ah.
Waxaa laga yaabaa inaad jeceshahay mod Flash oo naga mid ah
Cyborg Mod News for Us Us
Waxyaabaha cusub, waxa la arkayaa waa muuqaalka dabeecadaada, maadaama hada qaabkan aad iska dhigeyso Cyborg. Moodhadhku kuuma siinayo sifooyin cusub oo aan ahayn muuqaal, laakiin runtii waa wax badan oo madadaalo leh. Tani waa sababta oo ah waa isku-darka dabeecaddaada Mid ka mid ah annaga iyo Cyborg.
Laakiin sidoo kale waxaa jira waxyaabo kale oo lama filaan ah oo aad jeclaan doonto wax badan oo aad ka heli karto qaybta koofiyadaha iyo xayawaannada ciyaarta. Xaaladaha, ma awoodi doontid inaad wax ka bedesho sidoo kale, waan kula soo socodsiin doonnaa xilligan ka dib.
Habkani waa abuur Youtuber ah Sicklex iyo xilligan waxaan awoodi doonnaa inaan ku helno iyada oo loo heli karo kombuyuutarka, laakiin nooca Android horay ayaa looga shaqeeyay. Sida loo rakibo qaabkan, waa mid aad u fudud, maadaama waxa kaliya ee aad u baahan tahay ay tahay inaad hesho qaabka ka dibna aad ku sii wadato rakibideeda.
Haddii aad rabto inaad tijaabiso sida uu u shaqeynayo qaabka 'Cyborg Us Us', waxaan kaaga tageynaa xiriirka soo dejinta Mega markaa waad rakibi kartaa. Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato, waxaan sidoo kale kuu deyneynaa hage dhameystiran oo ku socda Holymod oo aad ku ogaan karto sida loo rakibo.
Waxaan kaloo kugu martiqaadeynaa inaad ku soo biirto kuweena Beesha khilaaf halkaas oo aad ka heli karto habka ugu wanaagsan ee tan iyo cayaaraha kale. Si la mid ah, warar badan iyo cibaaro ku saabsan ciyaaraha moodada.
Iskudhafka ugu fiican ee naga mid ah Maqaarka ugu fiican dhexdeenna Cyborg Mod oo ah Dhexdeenna mods naga mid ah 2021 mods naga mid ah supersro mods dhexdeenna mods cusub oo naga mid ah hargahoodu annaga dhexdeenna
Ku soo dejiso WhatsApp hufan qalabka Android